PDF Reader Premium bilaash wakhti go'an | Wararka IPhone
PDF Reader Premium bilaash wakhti xadidan
Muddo dhowr sano ah hadda, dukumiintiyada qaab PDF ah ayaa noqday habka ugu badan ee wax loo diro dukumiintiyada ay tahay inaysan wax ka badalin dhinacyada saddexaad. Dukaanka App-ka waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo ah oo noo oggolaanaya inaan aragno oo aan ku abuurno dukumentiyo qaabkan ah. PDF Reader Premium waa mid ka mid ah.
PDF Reader Premium ayaa noo oggolaaneysa iskaan, soo dejiso, soo dejiso oo u beddel faylal badan iyo sawirro hal dokumenti PDF ah bog badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku keydinno dukumiintiyada galka gaarka loo leeyahay si qof kale oo marin u heli kara iphonekeena uusan u heli karin.
Codsigan ayaa ka dhigaya kaydinta faylasha wax dhib ah maadaama ay noo ogolaaneyso fiilo la'aan wareejiso faylasha udhaxeeya kombuyutarkaaga / Mac iyo qalabkaaga iyada oo loo marayo isku xirka Wi-Fi, iyada oo loo marayo dekedda hillaaca qalabka ama si toos ah iyada oo loo marayo adeegga kaydinta daruuraha Apple iCloud.
Iskuduwaha isticmaalaha ee PDF Reader Premium waa mid dareen leh oo aad u fudud. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan si dhakhso leh u rarno labada sawir iyo qoraallada la beddelay. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan raadino qoraalka, aan iftiimino qayb ka mid ah dukumiintiga si ay aad ugu fududdahay uguna dhakhso badan tahay helitaanka qeybaha ugu xiisaha badan dukumiintiga markaan mar kale aqrino.
Astaamaha PDF Reader Premium
Ka soo dejiso sawirrada Maktabadda Sawirka iyo kamaradda la dhisay
Soo-gaadhista, madow iyo caddaan, jarjar
Wareejinta Faylka iyo Kaydinta
Adeegyada keydinta daruuraha isku dhafan (Dropbox, Google Docs, Google Drive, SugarSync, Box.net, MyDisk, iCloud)
Taageerada macmiilka FTP iyo WebDAV
Wi-Fi, iTunes USB, Furitaan
Maareynta koontooyin fara badan oo Cloud Cloud ah
PDF Reader Premium waxay leedahay qiime joogto ah oo ah 4,99 euro, inkasta oo wakhti kooban aan ku soo dejisan karno bilaash. In kasta oo uusan ahayn codsi bilaash ah, PDF Reader Premium wuxuu leeyahay iibsasho gudaha ka duwan oo loogu talagalay inay u adeegsadaan shirkadaha, oo aan ahayn heer gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » PDF Reader Premium bilaash wakhti xadidan
Uma arko iCloud in loo isticmaali karo barnaamijkan.
3 kulan, bilaash wakhti xadidan, kuwa yaryar ee guriga ku jira
Intel wuxuu ku kalsoon yahay in USB-C-ka cusubi uu hagaajinayo oo uu baabi'inayo jaakadda